Qarax bambo gacmeed oo ka dhacay isgoyska KPP ee magaalada Muqdisho – idalenews.com
Qarax bambo gacmeed oo ka dhacay isgoyska KPP ee magaalada Muqdisho
Laba ka tirsan ciidamada Dowladda Federaalka ayaa ku geeriyootay ilaa iyo hadda inta la ogyahay, halka in ka badan saddex askarina ay ku dhaawacmeen kolonyo ka tirsan ciidamada Dowladda oo watay gaari xilli ay marayeen isgoyska KPP ee magaalada Muqdisho.
Kooxo hubeysan ayaa la sheegay inay bambo gacmeed ku tuureen gaari ay wateen ciidamada Dowladda, halkaasi oo uu ka dhacay qarax saameeyay gaarigii ay ciidamadu wateen, iyadoo kooxihii falkaasi ka dambeeyayna ay halkaasi ka carareen.
Sida uu sheegayo qof goob jooge ah oo warbaahinta u waramayay kooxaha hubeysan ee weeraray ciidamada Dowladda ayaa halkaasi ku sugnaa saddexdii maalmood ee u dambeysay, kuwaasi oo gashanaa dareyska ciidamada.
Ma aha markii ugu horeysay oo ciidamada Dowladda qaraxyo kala duwan lagula eegto magaalada Muqdisho, tan iyo markii ay Shabaabku faarujiyeen caasimada, iyadoo xilliyada habeenkii weeraro ku qaada fariisimaha ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo laga qaadi doono ganaax lacageed, haddii aysan imaan fadhiyada Baarlamaanka
Turkiga oo mashaariic dhismo ka wado wadooyinka Muqdisho